Wararka - Maaskarada, ku fahan heerarka
Waqtigan xaadirka ah, dagaal ka dhan ah oof wareenka oo uu sababay cudurka coronavirus-ka cusub ayaa bilaabmay. Maaddaama ay tahay "safka ugu horreeya ee difaaca" ee ilaalinta nadaafadda shaqsiyeed, aad ayey muhiim u tahay in la xidho waji-daboolan oo buuxiya heerarka ka hortagga cudurrada faafa. Laga soo bilaabo N95 iyo KN95 ilaa maaskarada qalliinka caafimaadka, dadka caadiga ah waxaa laga yaabaa inay ku yeeshaan meelo indha la 'xulashada waji-furka. Halkan waxaan ku soo koobaynaa dhibcaha aqoonta ee heerka caadiga ah si aan kaaga caawino inaad fahamto dareenka guud ee waji-xidhka. Waa maxay heerarka waji-xidhka?
Waqtigaan la joogo, heerarka ugu muhiimsan ee dalkayga loogu talagalay maaskarada waxaa ka mid ah GB 2626-2019 “Neefsashada Ilaalinta Nadaafadda ee Iskuduwaha Falanqeeyayaasha Walxaha Muhiimka ah”, GB 19083-2010 “Shuruudaha Farsamada ee Wajiyada Difaaca Caafimaadka”, YY 0469-2011 “Maaskarada Qalliinka Caafimaadka”, GB / T 32610-2016 "Qeexitaanada Farsamada ee Maaskarada Difaaca Maalinlaha ah", iwm, waxay daboolayaan ilaalinta shaqaalaha, ilaalinta caafimaadka, ilaalinta madaniga iyo dhinacyada kale. GB 2626-2019 Res Neefsashada Ilaalinta Neefsashada Nadiifinta Neefsashada Neefsashada "waxaa soo saaray Maamulka Kormeerka Suuqa Gobolka iyo Maamulka Heerarka Qaranka ee 2019-12-31. Waa halbeeg qasab ah waxaana la hirgelin doonaa 2020-07-01. Waxyaabaha badbaadada ee jaangooyuhu dhigayo waxaa ka mid ah dhammaan noocyada walxaha yaryar, oo ay ku jiraan boodhka, qiiqa, ceeryaanta iyo noolaha. Waxay sidoo kale qeexaysaa soo saarista iyo tilmaamaha farsamo ee qalabka difaaca neefsashada, iyo maaddada, qaab-dhismeedka, muuqaalka, waxqabadka, iyo waxtarka sifeynta ee waasaska boodhka. (Heerka u adkaynta boorka), adkeysiga neefsashada, hababka baaritaanka, aqoonsiga sheyga, baakadaha, iwm. Waxay leeyihiin shuruudo adag.
GB 19083-2010 "Shuruudaha Farsamada ee Masks u Difaaca Caafimaadka" waxaa soo saaray Maamulkii Guud ee hore ee Kormeerka Tayada, Kormeerka iyo Karantinimada iyo Maamulka Heerarka Qaranka ee 2010-09-02 lana hirgaliyay 2011-08-01. Heerkani wuxuu qeexayaa shuruudaha farsamo, hababka tijaabada, calaamadaha iyo tilmaamaha isticmaalka waji-ka-ilaalinta caafimaadka, iyo sidoo kale baakadaha, gaadiidka iyo keydinta. Waxay ku habboon tahay in lagu isticmaalo jawiga shaqada ee caafimaadka si loo sifeeyo waxyaalaha hawada ku jira loona xakameeyo dhibcaha, dhiigga, dheecaannada jirka, dheecaannada, iwm. 4.10 ee heerka ayaa lagula talinayaa, inta soo hartay waa qasab.
YY 0469-2011 "Maaskarada Qalliinka Caafimaadka" waxaa soo saaray Maamulka Dawooyinka iyo Cuntada ee Gobolka 2011-12-31. Waa halbeeg lagu soo saaro warshadaha dawooyinka waxaana la hirgelin doonaa 2013-06-01. Heerkani wuxuu qeexayaa shuruudaha farsamo, hababka tijaabada, calaamadaha iyo tilmaamaha isticmaalka, baakadaha, gaadiidka iyo kaydinta waji-furka qalliinka caafimaadka. Heerka ayaa qeexaya in waxtarka sifaynta bakteeriyada ee waji-gashiga uusan ka yaraan karin 95%.
GB / T 32610-2016 "Qeexitaanada Farsamada ee Maaskarada Difaaca Maalinlaha ah" waxaa soo saaray Maamulkii hore ee Guud ee Kormeerka Tayada, Kormeerka iyo Karantinimada iyo Maamulka Heerarka Qaranka ee 2016-04-25. Waa halbeegga qaran ee ugu horreeya ee waddankayga loogu talagalay maaskarada difaaca rayidka, 2016-11 -Fulin ee 01. Heerku wuxuu ku lug leeyahay shuruudaha maaddooyinka ceeriin ee maaskaro, shuruudaha qaabdhismeedka, shuruudaha aqoonsiga calaamadda, shuruudaha muuqaalka, iwm. waxtarka, tusayaasha iska caabbinta iyo neefsashada, iyo tilmaamayaasha isku dhejinta. Jaangooyuhu wuxuu u baahan yahay in maaskarada ay awood u leeyihiin inay si ammaan ah oo adag u difaacaan afka iyo sanka, oo waa inaysan jirin gees iyo geeso fiiqan oo la taaban karo. Waxay leedahay sharciyo faahfaahsan oo ku saabsan waxyaabaha sababi kara waxyeelada jirka bini'aadamka, sida formaldehyde, dyes, iyo microorganisms, si loo hubiyo in dadweynuhu xiran karaan. Nabdoonaanta marka aad xiraneyso waji-ka-ilaalinta.
Waa maxay maaskaro guud?
Hadda maaskaro ugu badan ee la sheego waxaa ka mid ah KN95, N95, maaskaro qalliin caafimaad iwm.
Midka hore waa maaskarada 'KN95'. Marka loo eego kala soocida heerka qaran GB2626-2019 "Neefsashada Ilaalinta Neefsashada Is-xoqidda Qalabka Neefta", maaskaro ayaa loo qaybiyaa KN iyo KP iyadoo loo eegayo heerka waxtarka ee sheyga shaandhada. Nooca KP wuxuu ku habboon yahay shaandhaynta waxyaalaha saliida leh, nooca KN wuxuu ku habboon yahay shaandhaynta waxyaalaha aan saliidda lahayn. Waxaa ka mid ah, marka maaskaro KN95 lagu ogaado walxaha sodium chloride, waxtarka sifeyntu waa inay ka badnaataa ama u dhigantaa 95%, taas oo ah, waxtarka kala-soocidda ee walxaha aan saliida lahayn ee ka sarreeya 0.075 micron (dhexroorka dhexdhexaadka) wuu ka weyn yahay ama u siman yahay ilaa 95%.
Maaskaro 95 waa mid ka mid ah sagaal waji-waji oo ilaaliya qayb ka mid ah oo ay caddeysay NIOSH (Machadka Qaranka ee Badbaadada Shaqada iyo Caafimaadka). "N" macnaheedu waa adkaysi la'aan saliida. “95 ″ waxaa loola jeedaa in markii loo bandhigo tiro cayiman oo ah qayb ka mid ah tijaabooyinka gaarka ah, isku-soo-ururinta walxaha ku dhex jira maaskarada ayaa in ka badan 95% ka hooseysa isku-uruurinta walxaha ka baxsan maaskaro.
Kadibna waxaa jira waji qalliin caafimaad. Marka loo eego qeexida YY 0469-2019 "Maaskarada Qalliinka Caafimaadka", maaskaro qalliin caafimaad ayaa "ay xirtaan shaqaalaha caafimaadka ee kiliinikada ka hawlgala si ay u difaacaan bukaanada la daweynayo iyo shaqaalaha caafimaadka ee sameynaya qalliinka, ka hortagga dhiigga, Maaskarada qalliinka Caafimaadka ku faafa dareerayaasha jirka iyo buufinta ayaa ah waji daboolan oo ay xirtaan shaqaalaha caafimaadka ee goobta shaqada. ” Maaskarada noocan ah waxaa loo adeegsadaa bey'adaha caafimaadka sida rugaha caafimaadka, shaybaarrada, iyo qolalka qalliinka, waxaana loo qaybiyaa lakab biyo diida, lakabka shaandhada, iyo lakabka raaxada ee banaanka ilaa gudaha.
Xulo maaskarada si cilmiyaysan.
Khubaradu waxay sheegeen in bixinta ka hortagga wax ku oolka ah, xijaabku waa inuu sidoo kale tixgeliyaa raaxada qofka xiran oo uusan keenin saameyn xun sida halista noolaha. Guud ahaan marka laga hadlayo, sare u qaadka waxqabadka ilaalinta ee maaskarada, ayaa ka sii weyn saamaynta waxqabadka raaxada. Marka dadku xirtaan maaskaro oo ay neefsadaan, maaskarada waxay leedahay iska caabin cayiman oo socodka hawada ah. Marka u adkeysiga neefsashada uu aad u weynaado, dadka qaar waxay dareemi doonaan dawakhaad, laabta oo adkaata iyo dhib kale.
Dad kala duwan waxay leeyihiin warshado iyo jimicsiyo kala duwan, sidaa darteed waxay leeyihiin shuruudo kala duwan oo ku saabsan shaabadaynta, ilaalinta, raaxada, iyo la qabsiga maaskaro. Qaar ka mid ah dadka qaaska ah, sida carruurta, waayeelka, iyo dadka qaba cudurrada neef-mareenka iyo cudurrada wadnaha iyo xididdada, waa inay si taxaddar leh u doortaan nooca waji-xidhka. Ujeeddada hubinta nabadgelyada, iska ilaali shilalka sida hypoxia iyo dawakhaad markaad xiraneyso muddo dheer.
Ugu dambeyntiina, waxaan xusuusinayaa qof walba in nooc kasta oo uu yahay maaskarada, waa inaad si sax ah u maareysaa isticmaalka ka dib, si aanad ugu noqon il cudur cusub. Caadi ahaan diyaarso wax yar oo waji ah oo ku beddelo waqtigooda si loo dhiso safka ugu horreeya ee difaaca caafimaadka. Dhammaantiin waxaan idiin rajaynayaa caafimaad wanaagsan!
Waqtiga boostada: Jan-01-2021
Suufka jeermiska looga dilaaco, Maaskaro ka hortagga fayraska, Maaskarada Neefsashada, Maaskaro Maaskaro Waji Caafimaad ah, Suunka Kalkaalinta, Suufka Caafimaadka,